Himalaya Dainik » १० वर्षअघि सुनामीमा हराएकी श्रीमतीलाई अझै समुद्रमा खोज्दैछन् उनी…
१० वर्षअघि सुनामीमा हराएकी श्रीमतीलाई अझै समुद्रमा खोज्दैछन् उनी…
पोखरा- १० वर्षअघि सुनामीमा हराएकी श्रीमतीको खोजीमा एक व्यक्तिले अहिलेसम्म पनि समुद्रको गहिराइमा डुबुल्की मारिरहेका छन् । जापानका यासुओ ताकामात्सुकी पत्नी युको १० वर्षअघि २०११ मा आएको सुनामीमा परेर बेपत्ता भएकी थिइन् ।
यासुतोले आफ्नी श्रीमतीलाई खोज्नको लागि अण्डरवाटर डाइभिङको लाइसेन्स पनि लिइसकेका छन् । उनले विगत ७ वर्षदेखि एक्लै अण्डरवाटर डाइभिङ गरिरहेका छन् । उनलाई आफ्नी पत्नीसँग सम्बन्धित कुनै पनि चीज भेटिने आशा छ ।जापानमा सुनामीमा करिब २५ सय मानिस हराएका थिए ।
जापान सरकारले विगत केही वर्षदेखि अण्डरवाटर सर्च अभियान चलाइरहेको छ । यासुओले निजी रुपमा अण्डरवाटर डाइभिङ त गर्छन् नै साथमा उनी स्थानीय प्रशासनसँग हरेक महिना सम्पर्क गरेपछि उनीहरुसँग पनि संर्च अभियानको लागि सहभागी हुन्छन् ।
अहिलेसम्म यासुओले पानीभित्र कपडा, एल्बम लगायतका कैयौं चीजहरु भेटिसकेका छन् तर यी सबै अन्य व्यक्तिहरुका हुन् । अहिलेसम्म उनले आफ्नी पत्नीसँग सम्बन्धित कुनै चीज भेट्न सकेका छैनन् ।जापानमा २०११ मा ७०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा १३३ फिट अग्लो सुनामीका लाहर जापानको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा आएको थिए ।
यो सुनामीले फुकुसिमा आणविक प्लान्टलाई पनि क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । यसलाई युक्रेनको चेनरोबिलपछि सबैभन्दा ठूलो न्यूक्लियर विनाश मानिन्छ । यो सुनामीमा १५ हजार जना मारिएका थिए । करिब २ लाख ३० हजार नागरिकले घर छाड्नुपरेको थियो ।
द सनका अनुसार यो सुनामी आउँदा यासुओ पत्नीका विषयमा चिन्तित थिएनन् किनकि उनकी पत्नीले काम गर्ने ठाउँ पहाडको पछाडि थियो । तर, सुनामीको तीब्रता बढेपछि उनले काम गर्ने बैंकका कैयौं कर्मचारी डुबे, जसमध्ये यासुओकी पत्नी पनि थिइन् ।
यासुओले आफ्नो जीवन पत्नीको खोजीमा लगाइसकेका छन् । यासुओका अनुसार उनकी पत्नीले अन्तिम म्यासेजमा आफू बैंकको कामले थाकेको र घर आउन चाहेको बताएकी थिइन् । यही कारण यासुओलाई अझै पनि उनकी पत्नी घर फर्किन चाहन्छिन् भन्ने लाग्छ र उनले पत्नीको खोजी गरिरहेका छन् ।
के ऐश्वर्याको सुन्दरता नक्कली हो ?
फरक शैलीमा मौनीको सुन्दरता, हेरौँ १२ तस्बिर
सल्यानमा १६ वर्षीया दिदीको पेटमा भाइको गर्भ!
नेपाली महिलाको भारतमा कोठी, यसरी पक्राउ परिन् चमेली